Igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ Manufacturers - China igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ Factory, suppliers
Ngwunye igwe anaghị agba agba 201 (0.2mm-3.0mm)
Obosara: 300mm - 1500mm, ngwaahịa ndị dị warara dịka ịlele na ngwaahịa
304 / 304L Cold Rolled Igwe anaghị agba nchara
Mechaa: 2B / 2D
310 / 310s Cold Rolled Igwe anaghị agba nchara
Obosara: 300mm - 6000mm, ngwaahịa ndị ahụ dị warara dịka ịlele na ngwaahịa
Ngwugwu ibu: 1.0-3.0MT
410 410s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ (0.2mm-8mm)
polished igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ price
Mfe nkọwa banyere egbu maramara igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ
N'ihi na ewepụghị igwe anaghị agba nchara, na-emekarị-egbu maramara dị ka Ibé akwụkwọ pụtakwara mkpa ọkpụrụkpụ otu, ma mgbe ụfọdụ na thicker efere mkpa ga-egbu maramara maka pụrụ iche ngwa. Na ọtụtụ nke efere-egbu maramara site n'ibu polishing ụzọ.
Igwe anaghị agba nchara ọtụtụ ndị na-eji polishing usoro：
Commonlyzọ ndị a na-ejikarị eme ihe bụ: polishing electrolytic, polishing electrochemical, polishing mechanical
A na-ekewa usoro polishing electrochemical n'ime usoro abụọ: (1) Mgbaa ọkwa: ngwaahịa etisasịwo na-agbasa na electrolyte, na ike adịghị elu nke ihe ahụ na-ebelata, Ral μm. (2) Low-ìhè leveling: Anodic polarization, elu ihie ka mma.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 304 igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ 304 igwe anaghị agba nchara bụ a nkịtị ihe na igwe anaghị agba nchara, njupụta nke 7.93 g / cm3, makwaara dị ka 18/8 igwe anaghị agba nchara.High okpomọkụ eguzogide 800 ℃, na ezi nhazi arụmọrụ, elu ike, ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ na ngwá ụlọ mma ụlọ ọrụ na nri na ọgwụ na ụlọ ọrụ. Labelzọ ịdebanye aha na ahịa gụnyere 0Cr18Ni9 na SUS304, nke 0Cr18Ni9 pụtara s ...
General igwe anaghị agba nchara na ọkpụrụkpụ n'etiti 0.01-1.5mm, ike n'etiti 600-2100N / mm2 na okpomọkụ na-eguzogide oyi-akpọrepu igwe anaghị agba nchara na-kọwaa dị ka elu-ike nkenke anaghị agba nchara. Njehie nke nkenke igwe anaghị agba nchara n'ichepụta ihe dị ntakịrị karịa nke mpempe akwụkwọ nkịtị. Ohaneze gburugburu 5um ma ọ bụ karịa ala.
Bright annealing bụ a n'elu nhazi technology, tumadi mgbe annealing na a bizi ohere, okpomọkụ na-nwayọọ nwayọọ na-lowered na nanị ohere dịkarịa ala 500 degrees na mgbe ahụ ndammana mma, a ga-enwe ihie ka ọ ghara ime ka decarburization.